"Casina mna 'Susino"
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguManila
Indlu entle kwiinduli zeCarmignano: ikhitshi / igumbi lokuhlala, amagumbi amabini okulala,
Igumbi lokuhlambela eli-1. Indawo yangaphandle phambi kwendlu apho unokonwabela isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa emthunzini womthi weplum!
Umabonwakude ukhokele ngeNetflix.
Ingakwazi ukuhlalisa abantu aba-5.
Ukupaka kufutshane nendlu.
I-15 km ukusuka ePrato, 28 km ukusuka eFlorence, 36 km ukusuka ePisa, 30 km ukusuka ePistoia, 68 km ukusuka eLucca, 80 km ukusuka eViareggio.
"I-Casina i Susino" yindlu entle ye-55 square metre kwiinduli ezintle zaseCarmignano, kwiPhondo lasePrato (i-15 km) kunye kufuphi neFlorence (28 Km).
Indlu iye yabuyiselwa ukugcina iimpawu zokuqala ze-1800s.
Ikumanqanaba amabini: kumgangatho ophantsi kukho ikhitshi / igumbi lokuhlala eligcwele ifriji, isitovu, i-oveni, umatshini wokuhlamba kunye nesomisi, izinto zokupheka, umatshini wekofu kunye neketile. Umgangatho ongentla ufikeleleka kwizinyuko zakudala nezithe thaa (izitepsi ezili-15) kwaye kuyacetyiswa ukuba unyuke usehla ngokucothayo nangononophelo.
Kumgangatho ongaphezulu kukho amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela elineshawa kunye ne-bidet.
Igumbi n.1: kunye nebhedi ephindwe kabini 1.80 m x 2.00 m kunye ne-latex umatrasi (ikwahlulwe kwiibhedi ezimbini ezingatshatanga)
Igumbi lokulala eli-2 elinebhedi ephindwe kabini 1.80 m x 2.00 m kunye ne-latex mattress (ekwahlulahlula kwiibhedi ezimbini ezingatshatanga) kunye nebhedi ye-sofa kumntu owongezelelweyo we-5.
Indlu ibekwe ngaphakathi kwilali encinci yezindlu kwaye oku kukuvumela ukuba uzive ukhuselekile, kodwa ukonwabela ubumfihlo bakho.
Ungapaka ebaleni phambi kwendlu xa ufumana indawo, le yokupaka yenzelwe iimoto, ayilungelanga iilori kunye neeveni, okanye kukho iindawo ezimbini zokupaka ezisimahla enye ikwi200 metres enye ikwi400 metres njalo. ekhoyo, zombini zilungele iimoto, iilori kunye neeveni.
Kwi-100 yeemitha ukusuka endlwini kukho indawo yokumisa ibhasi eCap.
Onawo: amashiti, iingubo, iitawuli, iiroli ezi-2 zephepha langasese, isepha, ugwebu lokuhlambela, isepha yesitya, ityuwa, iswekile, umgubo wekofu kunye nokuphumla kwakho, isitulo esinengalo kunye nesitulo sokuhlala.
4.90 ·Izimvo eziyi-101
4.90 · Izimvo eziyi-101
Idolophu yaseCarmignano lilitye elinqabileyo elincinci, elikwiinduli eziluhlaza kufuphi nePrato, imvelaphi yayo indala kakhulu, kunye nembonakalo yomhlaba, imbali, ubugcisa kunye nexabiso lezinto zakudala, ikwaziwa kakhulu ngemveliso yayo yewayini, eyaziwa njenge. DOC.
Umbuki zindwendwe ngu- Manila
Uya kundifumana ukuba ndikwamkele xa ufika kwaye ndiya kufumaneka xa kukho imfuneko!